कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्न नदिन अपनाउनुपर्ने केही उपाय
2016 अप्रील 25 Bibek Sedhai
कोलेस्टेरोल बढेमा नसाबाट राम्रोसँग रक्तसञ्चार हुन पाउँदैन, जसले गर्दा हृदयाघात हुने जोखिम हुन्छ । कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्न नदिन अपनाउनुपर्ने केही उपाय यस्ता छन्ः – कोलेस्टेरोलको समस्या भएकाहरूले तेल र तेलजन्य पदार्थको सेवन सन्तुलित मात्रामा गर्नुपर्छ । प्रतिदिन तीन चम्चाभन्दा बढी तेल भरिसक्के खानु हुँदैन । – भान्छामा प्रयोग गर्ने तेल बदलिरहनुपर्छ । एकपटक ल्याएको तोरीको […]
माछा, मासु खानु हुन्छ ? एक पटक पढ्नुस्
2014 नोभेम्बर22014 नोभेम्बर2Bibek Sedhai
माछा, मासु खानु हुन्छ ? एक पटक पढ्नुस् माने पनि नमानेपनि मांसाहार नैतिक, ध्यात्मिक र मानवीय दृष्टीले राम्रो कुरा होइन । स्वस्थ्यका लागि पनि मांसाहार हानिकारक छ । हालै अमेरिकामा गरिएको एक अध्यनले मांसाहारकै कारण पछिल्लो समयमा जटिल नटिल रोगहरु आइरहेको पाहिएको छ । साकाहारी मानिसलाई क्यान्सर नै लागेपनि त्यसको उपचार सहज हुने शोककर्ता चिकित्सकको […]
रोसन पुरी/उज्यालो काठमाडौं, साउन ३२ – सबैलाई थाहा छ कि विवाह वंश विकास र निरन्तरताको महत्वपूर्ण पाटो हो । एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने प्राकृतिक रुप र जीवनलाई सफलतापूर्वक बिताउने भरपर्दो आधार पनि विवाह हो । सामाजिक रुपमा हेर्दा विवाह एक सामाजिक र पारिवारिक बन्धन पनि हो भने मनोवैज्ञानिक रुपमा प्राकृतिक र जैविक आवश्यकता । […]
शिघ्रपतन रोक्ने १० खानेकुरा
2013 जुलाई 27 2013 अगस्ट 15 Bibek Sedhai
शिघ्र पतन पुरुषहरुको एक मुख्य यौनिक समस्या हो । यो अधिकांस पुरुषहरुमा हुने समस्या हो, यद्यपि धेरैले आफ्नो अहम् तथा लाजका कारण यो कुरा भन्न सक्दैनन् । शिघ्रपतनका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । व्यक्ति अस्वस्थ हुनु, मानसिक तनाव, डर वा चिन्ता हुनु, सम्भोगका अरुचीका साथै अस्वस्थकर भोजन र व्यायामको कमी जस्ता कुराले पनि शिघ्रपतनका लागि […]
नेपाली महिलाहरू सेक्समा रमाउन नसक्नुको कारणहरु
2013 मार्च 11 2014 मे 23 adult
Pepsi Job Commercial
Send Me Some Jokes
अब खत्तम भएछ
Proudly powered by WordPress Theme: flymag child.